आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी « प्रशासन
आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी
२ आश्विन २०७५, मंगलबार
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा अर्थतन्त्रको आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले साउन र भदौ महिनामा एक खर्ब २० अर्ब राजश्व जम्मा भएको तथा चालू खर्च ९६ अर्ब र पूँजीगत खर्च छ खर्ब भइसकेको बताए ।
उनका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिभन्दा यस वर्ष ३७ प्रतिशतले राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि भएपनि पूँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । मन्त्री खतिवडाले तरलताको अवस्था (लगानीयोग्य रकम) को अभाव नरहेको, पूँजी बजारमा सुधार आइरहेको करको दायरा बढ्दै गएको, कर्जाको ब्याजदरमा सुधार देखिएको जानकारी दिए ।
उनले राजश्व र आम्दानीको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय (इ) सेवा सञ्चालनमा आएको, ऊखु किसानलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गरिएको, सार्वजनिक नीति लगानीसम्बन्धी विधेयक पेश हुने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । रासस
19 January, 2022 10:02 pm
इजरायलमा जिटुजी प्रक्रियामार्फत श्रमिक पठाउन सुरु
काठमाडौँ । दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएकाहरूमध्ये पहिलो चरणमा
19 January, 2022 9:29 pm
आयल निगमले फेरी बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
काठमाडौँ । आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ